Muuri News Network » XOG: Kooxdii Axmadey Bolol oo ceeb dhex fadhiistay & A.Madoobe oo ku gacan seeray.
XOG: Kooxdii Axmadey Bolol oo ceeb dhex fadhiistay & A.Madoobe oo ku gacan seeray.
Jun 16, 2016 - Comments off
Wararka naga soo gaaraya caasimadda Jubbaland ee kismaayo ayaa sheegaya in halkaasi ay ceeb ka raacday Axmadeey Bolol iyo kooxdiisa mucaarad ka ah kadib markii ay codsi u gudbisteyn madaxtooyada Jubbaland.
Kooxahan mucaaradka ayaa ka codsaday wasiirka Madaxtooyada Jubbaland in ay la kulmaan Madaxweyne Axmed Madoobe; balse nasiib darro Madaxweynaha Jubbaland oo ay dhawaan heshiis ay kala saxiixdeen Madaxda ugu sareysa ee Beesha Biimaal ku matasha dowladda federalka ayaa ku gacanseyray in uu la kulmo kooxa kale oo doonaya in ay daba mareeyaan madaxdoooda.
Waxa uu sidoo kale u cadeeyay in uu aqoonsanyahay Madaxdii u timid aayaha Beesha Biimaal ee Jubooyinkana uu kala tashan doono kaliyaha madaxdaas iyo weliba Suldaanka Saxda ah ee 2012kii soo xulay Xildhibaanada Beesha Biimaal ee dowladda federaalka.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in uusan Aqbali doonin suldaan cusub oo hadda ladoonayo in laga dhaadhiciyo jiritaanka balsa uu aqoonsanyahay Suldaankii soo xulay xildhibaanada beesha ee 2012kii oo ah Suldaan Ibraahim suldaan Cali Xaaji.
Kooxahaas mucaaradka ayaa u hanqal taagaya in ay daba mar ku sameeyaan heshiisyadii ay kala saxiixdeen madaxdooda iyo hogaamiyaha jubbaland; iyagoo doonaya in ay gaaran hadafkooda shaqsiyadeed ee ah Mar un yaa xildhibaan iga dhiga.
Wafdigan ayaa dhaafi la.Xaafadaha kismaayo iyagoo gabi ahaanba fashil iyo culeeysyo soo wajahay dhamaan